विदेशवाट चैते दशैंमा आउँछु भनेका श्रीमान, श्रीमतीको यस्तो कुरा थाहा पाएपछि अचानक आए, एक सातामै मृ त्यु (भिडियो हेर्नुस्) – NepalajaMedia
काठमाडौ । झापामा विदेशवाट आएको एक साता नहुँदै एक पुरुषको निधन भएपछि परिवारमा विवाद सिर्जना भएको छ । श्रीमतीको शंकास्पद गतिविधि थाहा पाएपछि चैते दशैंमा घर आउँछु भनेका पुरुषले एक सातामै देह त्याग गरेका हुन् । झापमा भएको यो घटना पछि परिवारमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
श्रीमतीले विरामी छु औषधी गर्न पैसा पठाइदिनु भनिन् । तर पछि उनले थाहा पाए श्रीमतीलाई केही पनि भएको छैन । चैते दशैंमा आउँछु भनेका श्रीमानले यस्तो कुरा थाहा पाएपछि पहिल्यै घरमा आएका थिए । तर उनीहरुबीच समझदारी हुन सकेन । उनको रहस्यमय निधन भयो । घर आएपछि पनि श्रीमती र छोराको ब्यवहार राम्रो थिएन । निधन हुनुअघि उनले आफ्ना दाईसंग यस्तै गुनासो गरेका थिए ।
अघिल्लो दिन भाईको घरमै गएर श्रीमान श्रीमतीलाई मिलेर बस भनेर दाईले सम्झाएर आएका थिए । तर भोलीपल्टै भाईको निधन भएको खबर पाएपछि परिवार अचम्ममा परेका छन् । घरमा भाईको शव थियो भने बुहारी र छोरा घरमा थिएनन् । भोलीपल्ट मात्र बुहारी फेला परेकी थिइन् ।
विदेशवाट फर्कदै उनले वाटोमा छोरालाई भेटेको तर छोरा आफुसंग कुरा गर्न नचाहेको भनेर भाईले आफुलाई गुनासो गरेको दाईले बताएका छन् । उनले आफु निकै समस्यामा परेको समेत दाईलाई बताएका थिए । श्रीमतीकै कारण आफ्नो भाईले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै बुहारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उनको परिवारको छ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन १७ गते सोमबार,तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Nextमेरो दाइको घ`टनालाइ कसैले राजनीति गर्छ भने त्यसलाइ मु’द्दा हाल्छु ,सदिक्षा फेरि आइन सडकमा (भिडियो हेर्नुस्)
विहान नुहाउनु ठीक कि बेलुका ? नुहाउनु अघि जान्नैपर्ने कुरा !
दार्चुला केन्द्रबिन्दु भएर ४ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भुकम्प